Ọkụ ogbo, isi ọkụ na -agagharị agagharị, ọkụ ogbo ọkụ - gafere
Na -enwu ọkụ 8*60W ọkụ mbugharị n'èzí
Ngwunye ọkụ na obere ọkụ na -agbanwe agbanwe nke nwere ike ịmanye ihe okike ọ bụla na njedebe. Ngwa ọ bụla na -abịa na 8x60W RGBW LED's, enwere ike ijikwa ya site na DMX ma ọ bụ RDM protocol. Ihe na-ekewa ngwa ngwa a na ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya bụ ikike ọ nwere ime mbugharị na-akpaghị aka site na 3.5º-40º mgbe a na-echekwa (IP-65) n'èzí.
Usoro mkpọchi na ngwa njikọ
Ọ na -abịa na mkpọchi mkpọchi nke nwere ike ijikọ ọtụtụ mmekorita ọnụ iji mepụta ọtụtụ ngwakọta dị iche iche dị ka oghere na -eme mkpọtụ, vetikal/kwụ ọtọ ka ị na -enye ike pikselụ onye ọrụ. Nke a na -eme ka ọ bụrụ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe nke enwere ike iji dị ka ntụpọ, strobe, mmanya, ma ọ bụ ntụpọ eserese pikselụ. N'ikpeazụ, oke kọmpat ya na nrụrụ ya siri ike na -enye ohere iji Z68 mee ihe ebe ọ bụla. Nabata hazie ya na etiti ọkụ.
Chọgharịa Na -agafe Ngwaọrụ ọkụ
Ihe karịrị afọ iri na-enwu ọkụ na ahụmịhe R&D, teknụzụ ngwaahịa dị n'okpuru ọkọlọtọ ahịa Europe, njikọta ụdị ngwaahịa bara ụba na ahụmịhe arụmọrụ buru ibu.
25x40W isi nkwalite mbugharị Matrix mbugharị nwere ...
M52-ọkwa ọhụrụ ọkụ dị ike 24*60W Led b ...
12x40W 4-in-1 RGBW Led na-agagharị isi isi ọkụ
19x15w rgbw 4in1 duru asacha mbugharị isi
1940Z-King Zoom 19x40W duru asacha na-akpụ akpụ isi 4-i ...
IP65 mmiri anaghị egbochi 1728 × 0.5w rgbw 4in1 strobe ...
F720-Elu ike na-akpụ akpụ asacha mbugharị n'èzí lighti ...
Ngosipụta ọkụ ọkụ isi mmalite zuru oke, onye na -enye ọkụ nke 2018 Korea Winter Olympic